Waxaan U Soo Iibsaday Macaamiil Diyaarad Nooceedu Yahay Drone Cusub ... Waana Cajiib | Martech Zone
Waxaan Dukaan Cusub U Iibsaday Macaamiisha… waana Cajiib
Khamiis, Janaayo 9, 2020 Khamiis, Janaayo 9, 2020 Douglas Karr
Dhowr sano ka hor, waxaan kula talinaayey qandaraasle weyn oo saqaf ah joogitaankooda internetka. Waxaan dib u dhisnay oo aan wax ka badalnay boggooda, waxaan bilownay olole socda oo faaruq ah si aan u qabanno dib u eegista, waxaanan bilownay inaan ku daabacno mashruucyadooda internetka. Hal shay oo maqnaa, in kastoo, ay ahaayeen kahor iyo kadib sawirrada guryaha.
Markaan soo galo qadarkooda iyo nidaamka maamul ee mashruuca, waxaan awooday inaan arko waxa guryaha u xirmaya iyo goorta mashaariicdu dhammaanayaan. Ka dib markaan akhriyo tan dib u eegista khadka tooska ah, waxaan iibsaday a DJI Mavic Pro drone.
In kasta oo ay diyaaraddu qaadatay sawirro cajiib ah oo ay fududahay in la duulo, waxay ahayd wax xanuun badan in dhab ahaan la dejiyo oo la shaqeeyo. Waxay ahayd inaan galo DJI waxaan u maleeyay codsi iPhone ah, ku xir taleefanka kantaroolaha, iyo ka sii darid gin duullimaad kasta. Haddii aan ku sugnaa gobol xaddidan, sidoo kale waa inaan diiwaangeliyaa duulimaadkeyga. Waxaan diyaaradda u adeegsaday dersin ama wax ku dhow oo mashruuc ah ka dibna waxaan ka iibiyey macmiilka markii aan dhammeeyey qandaraaska iyaga. Waa diyaarad aan duuliye leheyn, wali wey isticmaalayaan maanta. Kaliya ma fududa in la isticmaalo mana aanan haysan macmiil kale oo macno samaynaya.
Si dhakhso leh horay usocod sanad ah iyo Xaruntayda Xogta ee Midwest waxay furaysay qaab cusub, oo casri ah xarunta xogta ee Fort Wayne, Indiana oo ay ku jirtay gaashaan EMP. Waxay ahayd waqtigii aan qabsan lahaa xoogaa tallaal ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, sidaa darteed waxaan qabsaday qaar ka mid ah sawir qaadayaasha iyo sawir qaadayaasha gobolka.
Xigashooyinka aan ka helay shaqada waxay ahaayeen kuwo aad qaali u ah… kan ugu hooseeya wuxuu ahaa $ 3,000 si aan u soo duubo fiidiyowga iyo sawirada 3-da goobood ee shirkadda. Marka la eego wakhtiga wadista iyo ku tiirsanaanta cimilada, taasi ma ahayn cirbixiyeen… laakiin weli ma aanan doonaynin inaan galo kharash noocaas ah.
Waxaan u baxay oo akhriyey faallooyin dheeraad ah khadka tooska ah waxaanan ogaaday in ciyaartoy cusub oo suuqa jooga ahi uu cirka isku shareeray caan ka ahaa, Autel Robotics EVO. Iyada oo shaashad ku dhex jirta koontaroolaha oo aanan u baahnayn in la soo galo, kaliya waan qaadi karaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waan duuli karaa, waxaanan qaadi karaa fiidiyowyada iyo sawirrada aan u baahnaa. Waxay leedahay saqaf sare oo ku filan sidaa darteed ma jiro diiwaangelin FAA ama liisan loo baahan yahay si loo duulo. Dejin malahan, majiraan fiilooyin isku xira… kaliya daar oo duuli. Waa wax laga cabsado… oo runtii ka qaalisanaa Mavic Pro.
Faahfaahinta alaabta loogu talagalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn:
Ku qalabaysan afka hore ee EVO waxay bixisaa kamarad awood leh oo ku taal 3-dhidibka xasilinta gimbal kaas oo duubaya fiidiyowga 4k qaraarka ilaa 60 loop halkii ilbidhiqsi iyo xawaare duubis ah ilaa 100mbps oo ah H.264 ama H.265 codec.
Isticmaalka muraayadaha-muraayadda dhabta ah ee 'EVO' waxay sawirro cajaa'ib leh ku qaadataa 12 megapixels oo leh nooc ballaaran oo firfircoon oo faahfaahin dheeri ah iyo midabba leh.
Nidaamyada aragtida kumbuyuutarka sare ee isku-dhafan ayaa bixiya ka-hortagga caqabadda, ogaanshaha caqabadda gadaal iyo dareemayaasha hoose ee degitaanka saxda ah iyo duulimaadyada gudaha ee xasilloon.
EVO waxay ku faantaa waqtiyada duulimaadka illaa 30 daqiiqo oo u dhexeysa 4.3 mayl (7KM). Intaa waxaa sii dheer, EVO waxay bixisaa astaamo aan badbaado lahayn oo ku ogeysiinaya marka batterigu hooseeyo iyo waqtigii aad ku noqon lahayd guriga.
EVO waxaa ka mid ah kontorool fog oo leh muraayad 3.3-inji ah oo loo yaqaan 'OLED' oo ku siineysa macluumaad duulimaad muhiim ah ama toos ah oo fiidiyoow ah oo HD ah oo HD ah oo kuu oggolaaneysa inaad aragto muuqaalka kamaradda iyadoon loo baahnayn qalab mobiil ah.
Soo dejiso barnaamijka 'Autel Explorer' ee bilaashka ah ee loo heli karo Apple iOS ama aaladaha Android oo ku xir kumbuyuutarka fog oo marin u hel helitaanka habeyn horumarsan iyo astaamo duulimaadyo madaxbannaan sida Dynamic Track, Viewpoint, Orbit, VR first person view and Waypoint mission planning.
Evo wuxuu leeyahay booska Micro SD si fudud loogu wareejiyo feylasha.
Waxaan soo iibsaday baytariyaal dheeri ah iyo kiis jilicsan oo aan ku wado diyaaradda drone-ka. Si fiican ayey isu laablaabsataa waana fududahay in la qaado.
Iibso Autel Robotics EVO Drone Bundle
Waxaan ku qabanay guri furan xarunta cusub ee xogta waxaanan qaaday diyaaradda drone-ka, waxaan ka qaaday xoogaa sawirro iyo fiidiyowyo ah, waxayna u soo baxeen si qurux badan. Saxaafadda maxalliga ah ayaa jirtay waxaanan u diray iyaga fiidiyowyada ay markii dambe u adeegsadeen sheekadooda wararka. Dhowr usbuuc ka dib, barnaamij kale oo war bixin ah ayaa wareystay milkiileyaasha waxaana lagu soo daray fiidiyowga sidoo kale. Iyo, waxaan hagaajiyay degelkooda, oo ay ku jiraan sawirrada iyo fiidiyaha ku dhex jira. Waa kuwan sawirradu:
Wadada Henry Street
Xarumaha Xogta Nolosha ee Rasaasta Drones
Waxay ahayd $ 1,000 kii ugu fiicnaa abid ee aan qarash gareeyo… horeyba waxaan ugu soo laabtay maalgashi layaableh iyo macmiil aad iyo aad u faraxsan. Waxaas oo dhan waxaa ugu wanaagsan, uma baahnin wax caqli-gal ah oo ay ku shaqeeyaan gabi ahaanba… kaliya akhri tilmaamaha waxaadna qaadanaysaa tallaallo qumman daqiiqado gudahood. Xitaa waan soo saaray oo waxaan tijaabiyey inaan ka duulayo meel fog… waxayna kusoo laabatay daqiiqado gudahood. Waqti kale, dhab ahaan waxaan ugu duulay geed waana awooday inaan ka rujiyo. Haddana, waqti kale, waxaan u duulay dhanka guri… si la yaab lehna waxyeello haba yaraatee habayaraatee ma jirin. (Whew!)
Xusuusin dhinac ah: Autel waxay ku dhawaaqday nooca ugu cusub ee diyaaraddan, Autel Robotics EVO II… laakiin wali kamaan arag Amazon.
Daah-: Waxaan u isticmaalayaa nambarkeyga ku xiran labadoodaba DJI iyo Amazon qodobkan dhexdiisa.
Tags: gawaaridagawaarida gawaarida gawaarida EVOgawaarida gawaarida gawaarida EVO 2DJIDJI Mavicdronesawiro
Sida loo sahlo loona hagaajiyo WordPress sawirada muuqaalka leh
Acquia: Waa maxay Madal Xogta Macaamiil?